गति समाउँदै पर्यटन | .:: Welcome || Paryatannews
Home » विचार » गति समाउँदै पर्यटन
गति समाउँदै पर्यटन
नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै सकारात्मक गति पछ्याँउन थालेको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्प र असोज पहिलो साताबाट करीब पाँच महिना जारी रहेको नाकाबन्दीको मारमा परेको पर्यटन क्षेत्र विस्तारै तंग्रिन सुरु गरेको हो । पर्यटन मन्त्रालयले उपलव्ध गराएको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी बढ्दै गएको छ । नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकको तथ्यांक थपघट भइरहेको भएपनि पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी भने हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिएको छ । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि पर्यटक आगमन सन् २०१२ को ८ लाख ३ हजार जनाको पर्यटक आगमन दर सन् २०१३ मा ७ लाख ९७ हजार, २०१४ मा ७ लाख ९० हजार र सन् २०१५ मा ५ लाख ३८ हजार रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रबाट हुने आम्दानी भने पछिल्लो तीन वर्षसँग तुुलना गर्ने हो भने ३४ अर्बबाट ४६ अर्ब हुँदै ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
पर्यटक आगमनमा कमि देखिएको भएपनि यो क्षेत्रका भएको आम्दानी भने अहिलेसम्मकै बढी देखिएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा सटहि गर्दा हुने आम्दानी आव २०७१/७२ मा ५४ अर्ब रहेको छ । यो आम्दानी अघिल्लो आव ७०÷७१ मा ४६ अर्ब रुपैयाँ थियो । पर्यटनको लागि सबैभन्दा कमजोर मानिएको वर्षमा पनि साकारात्मक आम्दानी देखिनुले यो क्षेत्रको दायर र संभावना फराकिलो रहेको देखिएको छ ।
नेपालको पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनको गर्न आक्रामक बजारीकरण गर्नुपर्छ । पर्यटकीय गन्तव्य तथा गतिविधिको ब्राण्डिङ गरेर पर्यटनको आक्रामक बजारीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यटन क्षेत्रका विज्ञले तर्क पनि आएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले नेपालको पर्यटन र पर्यटकीय गन्तव्यको छविलाई केही समय पछाडि पारेको छ । पर्यटकीय गतिविधिको विकास र प्रवद्र्धन नै अहिलेको आवश्यकता हो । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवद्र्धन र विकास गर्न पर्यटन गरिएको खर्चलाई जवसम्म लगानीको रुपमा हेरिदैँन तवसम्म पर्यटन विकासले गति लिन सक्दैन । पर्यटनलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउँन सबैभन्दा पहिले आन्तरिक अवरोध रोक्नुपर्छ ।
नेपालमा अहिले आएका पर्यटकको उत्साहलाई बचाइराख्नु नै अहिलेको चुनौति हो । यसर्थ, ट्राभल तथा टुर एजेन्सीले पनि एक डेढ वर्षको योजना बनाउँने र भूकम्पपछि नेपालको पर्यटन पूर्ण रुपमा पूर्ण सामान्य अवस्थामा आइसेको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ । यो काम नेपाल सरकार तथा पर्यटन बोर्डले पनि आआफ्नै ढंगले गरिरहेकै छन् । यसमा निजी क्षेत्रको साथ, सहयोग र उत्साह हुनुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने भनेकै मार्केटिङ र ब्राडिङ गर्ने हो । यसका लागि मास मिडिया क्याम्पेन अहिलेको आवश्यकता पनि हो । पर्यटन क्षेत्रले उपभोक्तामूखी कार्यक्रम तय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
नेपाल पर्यटन बोर्डमा भएको यस्तो उपभोक्तामुखी भिजनमा एउटा कन्जुमर मार्केट फोकस गर्ने र अर्को डिजिटल मार्केट फोकस गर्ने भन्ने रहेको छ । नेपाल बाहिरका मिडिया फोकस गरेर हामीले अबको पर्यटकी प्रवद्र्धनको कामर्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पर्यटन प्रवद्र्धन र प्याकेज विक्री गर्ने भनेको अन्य बस्तुबजार जस्तो होइन् । पर्यटनले तत्काल लाभ दिने हुँदैन । यसले त प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गरेको चारपाँच वर्षपछि पनि फाइदा दिने हुनपर्छ । पर्यटनमा गरिएको खर्र्चलाई लगानीको रूपमा हेर्नुपर्छ । बोर्डले आगामी आवका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीसहित भारतीय च्यानलमा पनि विज्ञापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । करीब ४० करोड रुपैयाँ मिडिया मार्केटिङकै लागि खर्चने निर्णय बोर्डले गरिसकेको छ ।
नेपालले सन् १९९८ मा पर्यटन वर्ष मनाउँदा सन् १९९९ मा पर्यटक बढेको थियो । यसैगरी २०११ मा पर्यटन वर्ष मनाउँदा राजनीतिक अस्थिरता र बन्द हड्तालका बीचमा पनि सन्तोषजनक पर्यटक आगामन त्यपछिको वर्ष देखिएको थियो । यसर्थ नेपालको पर्यटमा प्रवद्र्धनपछिको प्रतिफल लिने वर्ष विभिन्न संकटपूर्ण अवस्था आउने गर्नुले पनि पर्यटलाई थिलथिलो पारेको छ ।
पर्यटका लागि अब बोर्डले गर्ने भनेकै पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्दै जाने र पर्यटनको बजारीकरण नै हो । यसैका लागि बोर्डले विसं २०७३ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणा गरिसकेको छ । बोर्डले घुमफिर वर्ष २०७३ भनेर पर्यटनको बजारीकरण सुरु गरेको छ । आगामी सन् २०१८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । पर्यटनको बजारीकरणकै लागि बोर्डले सानातिना योजनामा बजेट नछर्ने नीतिलाई पनि अगाडि सारेको बताएको छ ।
भूकम्प र आर्थिक नाकाबन्दीको बीचमा पनि पर्यटन क्षेत्रप्रतिको बुझाई भने विस्तारै सकारात्मक देखिएको छ । गत एक वर्षको पर्यटन तथ्यांकले पनि पर्यटनलाई सन्तोषजनक रुपमा चिनाएको छ । गत एक वर्षको अवधिमा पर्यटनले सबैभन्दा ठूलो सास्ती र शिथिलता व्यहोर्नु परेको भएपनि यसप्रतिको लगाव भने सह्राहनिय हुँदै गएको छ । भूकम्पपछिको एक वर्षमा नेपालमा १२ ओटा होटल, ३८ वटा रिभर गाइड, पाँच वटा ¥याफ्टिङ कम्पनी नयाँ दर्ता भएका छन् । भूकम्पको पहिलो ६ महिनासम्म २० प्रतिशत भन्दा कम अकुपेन्सी पुगेका होटल यो वसन्त ऋतु अर्थात पर्वतारोहण सिजन सुरु भएपनि ८० प्रतिशत पुगेको पर्यटन विगभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पर्वतारोहण पर्यटन ७८ प्रतिशतले रिकभर भएको छ ।
नेपाले पर्यटनमा देखिएको सकारात्मक गतिले पछिल्लो समय लगानी बढाउनुका साथै यस क्षेत्रप्रति व्यवसायीक रुचीसमेत बढेको छ । दुईतीन वर्षदेखि कम हुँदै गएको बन्द हड्ताल, नेपालमा बढेको सस्तो भाडादर (बजेट) एयरलाइन्सको बृद्धि, नेपाल सुरक्षित र सस्तो पर्यटकीय गन्तव्यको हो भनेर गरिएको प्रचारले सकारात्मक गति लिन सुरु गरेकै सयमा गएको भूकम्पले पर्यटन क्षेत्रलाई पछाडि धकेलेको हो । पर्यटन क्षेत्रप्रतिको सकारात्मक गति निकै राम्रो हुँदै गएको छ । अब सरकारले पर्यटकीय गन्तव्य र क्षेत्रको पूर्वाधारको पुनर्निमाण थालिसकेकोले आगामी एक वर्षभित्रै पर्यटक आगमन दर र पर्यटकीय गतिविधि भूकम्प अगाडिकै गतिमा पनि सक्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपाल बढेको धार्मिक गतिविधि, सरकारी प्राथमिकतामा पर्यटन, निजी क्षेत्रको पर्यटनमा रुची बढ्न थालेको छ । थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल लिन सक्ने क्षेत्रका रुपमा प्रचार गर्न सकिएकोले नै पछिल्लो समय पर्यटनले सकारात्मक गति लिन सुरु गरेको पर्यटन व्यवसायीकै बुझाई छ । नेपालमा भएको पर्यटनको सकारात्मक गतिले गत वर्ष २०७१ लाई उपलव्धिको वर्षका रुपमा चिनाएको भएपनि २०७२ लाई भने पर्यटनको लागि सबैभन्दा कमजोर वर्ष बन्यो । पर्यटन व्यवसायी आङछिरिङ शेर्पाका अनुसार गत वर्ष सगरमाथामा गएको हिउँपहिरो र अन्नपूर्णमा परेको हिमपातबाहेक समग्र पर्यटन क्षेत्रको गति निकै उत्साहप्रद र सकारात्मक नै रहेको छ । भूकम्पले विग्रिएका र क्षति पुगेकै सम्पदाको दृश्यावलोकनलाई पनि विस्तारै पर्यटकीय चासोको विषयका रुपमा हेर्न थालिएको छ ।
व्यवसायीक लगानी, प्रचारप्रचार तथा सरकारले सकारात्मक रुपमा पर्यटकीय गतिविधि अगाडि सारेकोले पर्यटन क्षेत्रले सुधारको गति लिएको पनि सहसचिव उपाध्याय बताउँछन् । नेपाल आउने विदेशी पर्यटक तथा आन्तरिक पर्यटकको चलहपहलाई दृष्ट्रिगत गरेर भएको पर्यटनको प्रवद्र्धनात्मक कामलाई सकारात्मक रुपमा अगाडि बढेको पनि छ ।
पर्यटन क्षेत्रको लागि सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको विनाशकारी भूकम्प गएको वर्ष पनि पाँच लाख ३२ हजार पर्यटक आउनु, पर्यटकले गर्ने दैनिक खर्च ५३ डलर हुनु र होटलको अकुपेन्सी ८० प्रतिशतसम्म पुग्नु भएको पर्यटन विभागको बुझाई छ । यो पर्यटकको दैनिक खर्च सन् २०१४ मा ४६ डलर थियो भने सन् २०१५ मा ५३ डलर पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले भूकम्प नगएको भए २०७३ सम्म यस्तो पर्यटकको खर्च ८० डलर प्रतिदिन पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो ।
(लेखक आनन्द पौडेल बरिष्ठ पर्यटन पत्रकार हुन् ।)
गति समाउँदै पर्यटन Reviewed by Shiva Shrestha on Jun 30 . नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै सकारात्मक गति पछ्याँउन थालेको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्प र असोज पहि नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख मेरुदण्ड मानिने पर्यटन क्षेत्रले बिस्तारै सकारात्मक गति पछ्याँउन थालेको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गएको विनाशकारी भूकम्प र असोज पहि Rating: 0